Xog: Muxuu la xiriiraa Socdaalka uu Cali Cosoble ku yimid Muqdisho,? – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Hirshabelle, Cali C/llaahi Cosoble oo dhawaan ay sheegteen Xildhibaano ka tirsan Maamulkaasi inay Xilka ka qaadeen ayaa galabta gaaray magaalada Muqdisho, kaddib markii afartii cisho ee la soo dhaafay uu ku sugnaa magaalada Jowhar.
Sida ay sheegayaan wararka Cali Cosoble ayaa u Muqdisho u yimid la kulanka Wakiilada Beesha Caalamka ee fadhigoodu yahay Xalane, si uu ugu gudbiyo dacwad ka dhan ah dowladda Federaalka iyo in xil ka qaadistiisa ay aheyd sharci darro.
Cali Cosoble ayaa magaalada Jowhar gaaray maalin kaddib markii Xildhibaanada Hirshabeelle xilka ka qaadeen, waxaana Madaxwayne Ku Xigeenkiisa, Cali Guudlaawe oo wax ka waday Qorshaha lagu afgambinayay Cosoble uu u diiday inay u tagaan Xildhibaanadda, isagoo u adeegsaday Awood Ciidan, taasoo keentay in xittaa Xildhibaanaddii taabacsanaa in lagu qasbo inay badalaan afkaartooda oo ay ka hor yimaadaan Cosoble.
Warqad Cabasho ah oo uu u diray Beesha Caalamka ayuu Cosoble ku tilmaamay Tallaabadii Xildhibaanadda inay ahayd Afgambui Siyaasadeed oo uu ka dambeeyay Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre.
Imaanshaha Cali Cosoble ee Muqdisho ayaa ku soo beegmaya, iyadoo shalay uu Muqdisho soo gaaray Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo la sheegay inay u yeertay Xukuumadda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa wali ka hadlin mowqifka ay ka taagan tahay xil ka qaadistii Cali Cosoble iyo xiisada siyaasadeed ee Hirshabeelle, iyadoo Wasiiro ku baxay arrintan aysan wali wax war ah ka soo saarin waxyaabihii ay kala soo kulmeen dhinacyadii ay kula kulmeen magaalada Jowhar.
Faahfaahin Dheeriye oo ku saabsan Dagaalo Caawa ka soconaya Deegaanka Bariire ee Sh/Hoose oo Maanta lagala wareegay Alshabaab.